Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Mbudzi, 01, 202
Mbudzi 01, 2021
Bazi rezvehutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemasere kana kuti 4 678.
Mutungamiri wenyika VaEemmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika zana kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze unokokerwa neUnited Nations weCOP26 kuGlasgow, Scotland. Zimbabwe inoti yakazvipira kutora matanho ekudzikisa mabasa anosvibisa mweya wekufema zvokanganisa mamiriro ekunze. Tichakupai hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuScotland zviri kuratidzira kufarira VaMnangagwa nezviri kuvashora zvichiti vari kutyora kodzero dzevanhu.
Nhengo dzekereke yeNguwo Tsvuku kana kuti Jerusalem Church dzonyura dzichiyedza kutora tsvimbo yekutungamira murwizi rweMazowe kuRushinga.
Munyaya dzezvehutano, tiri kutarisa nyaya yechirwere chegomarara muvana vadiki.
Vatsigiri venhabvu votadza kupinda munhandare mumakwikwi eChibuku Super Cup vachiti mari yavari kubhadhariswa yakawanda,
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano wekushanduka kwemamiriro ekunze kuGlasgow, Scotland uko mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari kubatana nevatungamiri vedzimwe nyika zana kuzeya nyaya iyi. Tichataurawo nezvechirwere cheCovid-19